Home » How To.. » ဇော်ဂျီယူနီမှသည် ညဈေးဆီသို့
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Nov 25, 2016 in How To.., Think Different | 16 comments
M လုလင် ။ ကျနော် … taxi တွေကို မယုံ ဘူး ကိုရင် .. သူတို့မောင်းတာ စီးရင် ကားမူးတယ် … ?
M လုလင် ။ ဟုတ်တယ် … ဦးသန်းရွှေ ဆိုရင်လဲ ….. မှန်ကန် နေရဲ့သားနဲ့ လူအမြင်ကတ် တာ များသွားလို့ …
Fatty Cat ။ ဟေ့ဟေ့… အဲ့နှစ်ခုက သဘောသဘာဝခြင်းမတူဘူး… အဲ့လိုဆွဲစိလို့မှမရတာ…
တိမ်မည်း ။ ဒီအမြင်လည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
ရဲစည် ။ ညဈေးတန်း အင်းလိပ်လို့ ဘလေဇာ ခေါ်မလား အဲ့တာလေး နေရာကျယ်ကျယ် အရင်လုပ်ရမှာ
အာဂ ။ ဒါတို့ တိုင်းတို့ပြည် တို့ ဇော်ဂျီမြေ လွတ်လပ်တဲ့ ငါ့တို့တွေ တိုင်ရင်းသားလူမျိုးအားလုံး ဇော် ကြပေ။ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Fatty Cat ။ လမ်းဘေးဈေးသည်နဲ့ ယူနီကုဒ် သဘောသဘာဝအရ လုံးဝမတူကွဲပြားတယ်…
ပြင်သစ်မှာ အဲလို ခွဲထားတယ်ဟုတ်
မဟာရန်ကုန်ကြီးမှာ ကားရပ်နားထားလို့ရတယ် အထပ်မြင့် စင်တာတွေ ဖော်ဆောင်ဖို့လိုနေပါပြီ၊ အဲလိုတွေ မလုပ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဟိုဘက်တိုးလိုက် ဒီဖက်တိုးလိုက် စတဲ့မြို့သစ်တွေ ချဲ့လည်း မြေ၀ယ်ပြန်ရောင်း ကောင်းစားဈေးကွက်ဘဲဖြစ်မယ်။ ကားထားတဲ့ အထပ်မြင့်စင်တာတွေ ဆောက်ဖို့ မြေနေရာမှမရှိတာဟု ဆင်ခြေပေးရင် တစ်ခုပြောချင်တာက အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန တွေပိုင်ပြီး အလုပ်မဖြစ် နိုင်ငံဝင်ငွေမရတဲ့ မြေနေရာတွေအများကြီးပါ စစ်ရုံးပိုင်မြေတို့ ရထားဝန်ကြီးပိုင်မြေတို့ ကုန်ထုတ်မရှိတော့တဲ့ ဂုန်နီစက်ရုံ ချီမျဉ်စက်ရုံ လှည်းတန်းလမ်းဆုံနားက တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မြေ အဆညမြေ အဲဒီလိုမြေတွေမှာ ၀န်ကြီးဌာနတွေက ကုမ္မဏီတွေကို တင်တာခေါ်ပြီး မြေဌားစနစ်နဲ့ အထပ်မြင့်ကားပါကင်လုပ်ငန်းကန်ထရိုက်ပေးလိုက် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတွေလည်း ၀န်ကြီးဌာန၀န်ငွေရမယ် လမ်းပေါ်မှာ ပါကင်ကားတွေလည်း ရှင်းသွားမယ်ပေါ့။ downtown ထဲမ၀င်မှီလောက်မှာ အထပ်မြင့်ကားပါကင်တွေထား downtown ထဲကို ပါပလစ် taxi တွေနဲ့ဘဲ ခရီးတိုသွားခိုင်း taxi တွေကိုလည်း ခရီးသည်ချပေးပြီးရင် mall တို့ taxi ရပ်ခွင့်နေရာတွေမှာဘဲရပ်နား နေရာတကာ ရပ်ခွင့်မပေးရင် downtown ထဲကားကျပ်တာလျော့လာမယ်၊ အဲလိုဘဲ မြို့နယ်တွေလမ်းတွေမှာ ဘေးတဖက်စီရပ်ထားကြတဲ့ အဲနားကတိုက်ခန်းနေသူတွေရဲ့ ကားတွေကို အနီးစပ်ဆုံးအထပ်မြင့်ကားပါကင်မှာ ရပ်နားထားစေရင် မြို့နယ်လမ်းတွေလည်း ချောင်လာမယ် မြေနေရာတွေ ပိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေလည်း ၀င်ငွေရ ရန်ကုန်အစိုးရဘက်ဂျက်လည်းတောင့်တင်းလာမယ်ဟု အတွေးခေါင်ခေါင်တွေးမိတာလေးပါ။
.ဆောင်ကြစမ်း အခွန်တွေဆိုရင်တော့. . . ရှေ့ဆုံးက ပြေး ရှောင်မယ့်သူတွေ
ပြောပေါင်း များ လို့ ရိုးနေပါပြီ …….
သဘော အကျဆုံးက သတင်းကြေညာသွားတာ …
ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်ကို.. အမေရိကားလည်လည်ခေါ်လိုက်တာကပဲ.. အဖြေလို့ထင်တယ်..။
ဘာဒေမှန်းတော့ သေချာမသိပေမဲ့ အစိုးရသစ်လုပ်သမျှ ဘေးထိုင်ပြောနေတဲ့ သူတွေတော့ ထိုင်ရီနေရတာပဲ ပျော်နေရတယ်။